Perception Ikhefi - Imagazini yoyilo
Ikhefi Le cafe incinci ifudumeleyo yeplanga ibekwe kwikona yeendlela enqamlezileyo kwindawo ethuleyo. Indawo yokulungiselela evulekileyo esembindini yenza amava acocekileyo kwaye abanzi okusebenza kwe-barista kubakhenkethi kuyo yonke indawo esihlalo sebar okanye isitulo setafile kwikhefi. Isilingi into ebizwa ngokuba "ngumthi wokufiphaza" iqala ngasemva kwendawo yokulungiselela, kwaye igubungela ummandla wabathengi ukwenza yonke imeko yale cafe. Inika isiphumo esingaqhelekanga sendawo kubakhenkethi kwaye ibe yindawo yokuphangela yabantu abafuna ukulahleka ekucingeni ngekofu yencasa.
Igama leprojekthi : Perception, Igama labayili : Haejun Jung, Igama lomthengi : Perception.
Ikhefi Haejun Jung Perception